ဆိုက်​ကို ​ဘယ်​လို link ​ပြန်​ညွှန်း​ခိုင်း​မ​လဲ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ဆိုက်​ကို ​ဘယ်​လို link ​ပြန်​ညွှန်း​ခိုင်း​မ​လဲ
​ညီ​လေး ​နေ​ဇင်​လတ်​က ​မေး​လာ​တာ​ပါ .. ​အ​ရင်​က​လဲ ​ဘယ်​သူ​လဲ ​မ​သိ​ဘူး ​မေး​ပါ​သေး​တယ် ​ရေး​မယ်​ရေး​မယ် ​နဲ့ ​အ​လှည့်​မ​ရောက် ​တာ​ပါ . ​အောက်​က code ​တွေ​ကို copy ​ကူး​ပြီး Page Elements >> AddaGadget ​ကို​သွား​ပြီး​တာ​နဲ့ html ​ကို ​ရွေး​ပြီး ​ကူး​ထည့်​လိုက်​ပါ . ​လို​အပ်​တာ ​တွေ​ကို​ပဲ ​လိုက်​ပြောင်း​ပါ . textarea ​ကို 25 ​ပေး​ထား​ပါ​တယ် .. ​အ​ဆင်​ပြေ​သ​လို ​ပေး​လိုက်​ပါ . ​ကို့​ဆိုက်​နဲ့​ကိုက်​သ​လို​ပေါ့ ..
<center><a href="http://www.nyinaymin.com"><img src="http://img30.picoodle.com/img/img30/2/7/12/nyinaymin/f_referm_8e944a9.gif"/></a></center>
<textarea cols="25"><center><a href="http://www.nyinaymin.com" target="_blank"><img src="http://img30.picoodle.com/img/img30/2/7/12/nyinaymin/f_referm_8e944a9.gif" border="0" alt="www.nyinaymin.com" /></a></center></textarea>
​ကဲ ​အ​ပေါ်​မှာ ​မှင်​အ​နီ​နဲ့​ရေး​ထား​တာ​က ​ကို့​ရဲ့ ​ဆိုက်​လိပ်​စာ​ဖြည့်​ရ​မှာ​ပါ . ​မှင် ​ပန်း​ရောင်​နဲ့​ရေး​ထား​တာ​က​တော့ ​ကို​ထည့်​ပေး​မယ့် ​ကို့​ဆိုက်​အ​တွက် ​ဒီ​ဇိုင်း​ပုံ ​လှ​လှေ​လး​ပေါ့ . photoshop ​ပိုင်​ရင်​ပိုင်​သ​လို ​လုပ်​လို့​ရ​ပါ​တယ် . ​နောက်​ပိုင်း​ကျွန်​တော် photoshop ​အ​တွက် ​ပုံ​စံ​လှ​လှေ​လး​တွေ ​လုပ်​ပုံ​လုပ်​နည်း ​ထပ်​တင်​ပေး​ပါ​ဦး​မယ် . ​ပေး​ချင်​တာ​တွေ​က​တော့ ​အ​များ​ကြီး​ပဲ . ​ဗိုင်း​ရပ်စ်​ရေး​သား​ပုံ ​ရေး​သား​နည်း​အ​ချို့​ရယ် ၊ ​ဟို​တစ်​နေ့​က ​ပြော​ခဲ့​တဲ့ ​အ​ထူး​အ​စီ​အ​စဉ်​ရယ် . ​တင်​ပေး​စ​ရာ program ​တွေ​ရယ် . ​အ​များ​ကြီး​ပဲ ​အ​ခု​တော့ ​တောင်း​ဆို​တာ​တွေ​ကို ​ဦး​စား​ပေး​ပြီး ​တင်​ပေး​သွား​ပါ့​မယ် ..
Anonymous September 6, 2009 at 3:10 PM
​မ​သိ​သူ​တွေ ​အ​တွက် ​ရွှေ​ပါ​ပဲ ​ညီ​လေး..။
maimai December 24, 2009 at 5:29 PM
​ဒီ​ဟာ​လေး​မ​သိ​လို့​ပါ။ ​ကျေး​ဇူး​ပြု​ပြီး ​ပြော​ပြ​စေ​ခြင်​ပါ​တယ်။
Address ​ရဲ့​အ​ရှေ့​က ​ကိုယ်​လို​ခြင်​တဲ့​ပုံ​ကို upload ​မ​လုပ်​တတ်​လို့​ပါ။ ​ဒီ​လို​ဖြစ်​အောင်​ပေါ့။
​အဲ​ဒီ​လို URL ​ရ​လာ​အောင်​မ​လုပ်​တတ်​ပါ။ ​အစ်​ကို​သုံး​တဲ့ ​မြန်​မာ​အ​လံ​လေး​ပုံ​စံ​ပေါ့။ ​မြန်​မာ​အ​လံ​နေ​ရာ​မှာ ​အ​ခြား​ပုံ​ထည့်​ခြင်​ပါ​တယ် ။ Uulod ​မ​လုပ်​တတ်​လို့။
​မောက်​မောက်​လေး June 22, 2012 at 4:09 PM
​ကျေး​ဇူး​ပဲ ​အ​ကို​ရေ ​ညွှန်း​လိုက်​ပြီး​ဗျာ
​လွမ်း​ပိုင်​ရှင်​အ​လွမ်း November 7, 2012 at 4:34 PM
​လွမ်း​ပိုင်​ရှင်​အ​လွမ်း November 7, 2012 at 4:37 PM
​လွမ်း​ပိုင်​ရှင်​အ​လွမ်း November 7, 2012 at 4:41 PM
​ဆူး​အေ​မီ February 15, 2013 at 9:49 PM
​ဒီ error ​ပေါ်​နေ​တာ ​ဘာ့​ကြောင့်​လဲ